वर्षा सिवाकोटीको दशै‌ं सम्झना– 'बुवा बितेपछिका हरेक दशैं शून्य लाग्न थालेको छ'
ज्ञवाली लोकान्तरका कला र मनोरञ्जन संवाददाता हुन् ।
यो पटकको दशैं कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
पहिलेको दशैंभन्दा अलिकति फरक हुन्छ । पक्कै पनि कोभिड–१९ ले गर्दा यसपटक हामीले खुलेर दशैं मनाउन पाउने छैनौं । घरबाट कतै नजाने निर्णय गरेका छौं । आफन्तहरूलाई पनि यसपटक टीका लगाउन नआउनुस् भनेका छौं । वास्तवमा यो पटकको दशैं सुनसान हुने भयो ।
योपटक दशैंमा मिस भएको कुरा के हो ?
आफन्तसँगको भेटघाट, रमझम ।
जिन्दगीमा बिर्सिन नसकेको दशैं सम्झना ?
बुवा खस्नुभएको वर्ष । त्यो वर्ष असाध्यै नराम्रो लागेको थियो । सधैँ टिका लगाएर आशीर्वाद दिने मान्छेलाई अबदेखि कहिल्यै देख्न पाउने छैनौं भनेर असाध्यै यादले सतायो । आज पहिलोपटक भन्दैछु, मलाई त्यसपछिका हरेक दशैं शून्य लाग्न थालेको छ ।
दशैंको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो ?
सबै कामबाट अलिकति भएपनि ब्रेक मिल्छ र परिवारसँग केही समय बिताउने मौका पाइन्छ ।
दशैंमा सपिङ गर्ने बानी कत्तिको छ ?
दशैंमा बच्चा बेला जस्तो उत्साह हुँदैन । त्यसपछि आवश्यक पर्दा सपिङ गर्ने, आवश्यक परेन भने नगर्ने हुन थाल्यो ।
दशैंको राम्रो–नराम्रो पक्ष के–के हो ?
दशैंको नराम्रो पक्ष छैन । यसका सबै राम्रा पक्ष छन् । शायद त्यही भएकाले यसलाई बडा दशैं भनिएको हुन सक्छ । दशैंका बेलामा मानिसहरू धेरै फ्री हुने र त्यो समयमा खानपान, जुवातास, रमाइलो गर्ने चलन छ । रमाइलो गर्दैगर्दा अलिकति ध्यान दिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो ।
दशैं मनाउने तरिका परिवर्तन हुँदै गएको जस्तो लाग्छ ?
दशैं मनाउने तरिका परिवर्तन भएको त होइन तर, आधुनिकताले पहिलाभन्दा यसको महत्त्व कम हुँदै गएको जस्तो मैले अनुभव गरेकी छु । तर, मेरो र मेरो परिवारका लागि दशैं सधैँ उस्तै रमाइलो पर्व हो ।
दशैंका बेला खानपानमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन नि ?
चिल्लो पिरोबाट जोगिनुपर्छ । अर्को कुरा जे खाँदा पनि लिमिटमा रहेर सेवन गर्न सकियो भने स्वस्थ हुन सकिन्छ ।
सानो छँदाको दशैं सम्झना कत्तिको याद गर्नुभएको छ ?
काठमाडौं बस्ने भएकाले दशैंमा गाडी चढेर बुवाको घर, मामाघर गइन्थ्यो, त्यो नै खुशी लाग्ने यादहरू हुन् ।
दशैँका बेला सधैँ सम्झनामा आउने एउटा याद के हो ?
मलाई गाउँमा गएर दशैंको टीका लगाएको असाध्यै मन पर्छ । गाउँको पन, गाउँको माया, गाउँबाट पाइने आत्मीय व्यवहारलगायत धेरै कुरा मन पर्छ ।
शायद, शहर हो परिवर्तन हुँदै गयो । गाउँ कहिल्यै आफ्नो कुरूप अनुहार देखाउन सकेन ।
भरतमणि पौडेल बने ‘कमेडी च्याम्पियन’
छोराको तस्वीर र नाम सार्वजनिक गर्दै ऋचाले लेखिन्– अ...
सरोज र आश्माको ‘कति राम्रो सुहाएको’ (भिडियोसहित)
न्यूड फोटो शेयर गर्दै गहना वशिष्टले भनिन् : रहर नै ...
ओलीजीले महेन्द्रले झैँ ‘कार्ड’ खेल्नुभयो, छिमेकीलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौंः डा. नारायण खड्का [अन्तर्वार्ता]
नेपालको संविधान : आशाको बिम्ब तर धमिल्याइँदै कार्यान्वयन !
स्थानीय आर्थिक विकासको अवधारणा : यी ७ सूत्र अपनाए सम्पन्न बन्न सक्छन् हाम्रा पालिका
असोज १, २०७८
'मूर्ख बहस नगरौं, एमसीसी नआउँदा नै हामीलाई शान्ति हुन्छ'
मुटु स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ ? यस्ता खानेकुरामा ध्यान दिनुस्
बट्टामा खाँदिएको अचार खाने गर्नुभएको छ ? स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउन सक्छ
यो हो संसारको सबभन्दा लामो मोटरसाइकल
भटमास खानुका फाइदा मात्रै छैनन्, यस्ता व्यक्तिका लागि हुन्छ बिष समान हुन्छ
टमाटरका यी १० फाइदा, थाहा पाएर छक्क पर्नुहुन्छ तपाईं
जानकारी - स्वास्थ्यका लागि तातो पानीले नुहाएको ठीक कि चिसोले ?
यी अंगहरूलाई बारम्बार छुँदा हुन्छ स्वास्थ्यलाई हानि, तपाईमा यस्तो बानी त छैन ?